Global Voices teny Malagasy » Bilaogera/mpanao gazety Toniziana nosamborina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Janoary 2019 7:25 GMT 1	 · Mpanoratra Sami Ben Gharbia Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Nosamborina  tamin'ny 26 Novambra ity bilaogera sady mpanao gazety Toniziana malaza Slim Boukhdir ity voampanga ho nanao “herisetra tamin'ny mpiasam-panjakana” sy “nanao tsinontsinona ny henatra imasom-bahoaka”. Araka ny filazan'ny Komity mpiaro ny mpanao gazety,  nolavin'ny fitsarana ny famotsorana azy ary ho atao rahampitso 4 Desambra ny fotoam-pitsarana azy. Mety higadra hatramin'ny 18 volana an-tranomaizina i Slim Boukhir.
Niharan'ny fanorisorenana hatrany i Slim Boukhdir, niharan'ny herisetra ary norahonan'ny polisy manao fanamiana sivily sy ireo jiolahimboto akaikin'ireo vinantolahin'ny filoha Ben Ali. Rehefa very asa amin'ny maha-mpanao gazety tao amin'ny gazety “Akhbar Al-Joumhurya” (Vaovaon'ny Repoblika) tamin'ny Aogositra 2004, nanomboka nibilaogy tao amin'ny Arabic Blog Service: Maktoob Blog i Slim Boukhdhir. Saingy tamin'ny volana Jolay 2007, voajirika sy voafafa  ny bilaoginy .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/11/132985/
 Nosazian'ny : http://www.francesoir.fr/etranger/2007/12/04/tunisie.html
 Komity mpiaro ny mpanao gazety,: http://www.cpj.org/news/2007/mideast/tunisia26novt07na.html
 Niharan'ny fanorisorenana hatrany : https://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/05/22/tunisia-blogger-and-journalist-slim-boukhdir-repeatedly-assaulted/
 Maktoob Blog : http://maktoobblog.com/
 voajirika sy voafafa: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/07/14/blog-of-tunisian-journalist-and-blogger-hacked/